China HDPE pipe extrusion akara emepụta na suppliers | FAYGO
Nke a Pee anwụrụ akara ekewet site: ihe chaja + SJ90 Single ịghasa extruder + anwụrụ ebu + agụụ mmezi tank + spraying tank tank x 2sets + atọ katapila haul-apụ igwe + dịghị-ájá cutter + stacker.
Tankgbọ mmiri tankị na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ ụlọ abụọ: mmezi agụụ na akụkụ dị jụụ. Ma nke agụụ tank na spraying jụrụ tank ịmụta igwe anaghị agba nchara 304 #. Usoro ihe nhicha nke magburu onwe ya na-achota onu ogugu nke ọkpọkọ; spraying spraying ga-mma jụrụ arụmọrụ; Nchekwa mmiri na-achịkwa mmiri ọkụ na-eme ka igwe nwee ọgụgụ isi.
Igwe igwe na-agbanye ahịrị nke ọkpọkọ a ga-ewere ụdị caterpillars. Site na koodu mita, ọ nwere ike ịgụ ogologo ọkpọkọ n'oge nrụpụta. Tingcha usoro ịmụta dịghị-ájá cutter na PLC akara usoro.
nlereanya FGE63 FGE110 FGE-250 FGE 315 FGE630 FGE800
ọkpọkọ ọkpọkọ 20-63mm 20-110mm 75-250mm 110-315mm 315-630mm 500-800mm
ụdị ọzọ SJ65 SJ75 SJ90 SJ90 SJ120 SJ120 + SJ90
ike moto 37kw 55kw 90kw 160kw 280kw 280KW + 160KW
extrusion ikike 100kg / awa 150kg 220kg 400kg 700kg 1000kg
Nke gara aga: PPR igwe igwe
Osote: 12-575mm6.5mm oké Pee anwụrụ mmepụta akara
WPC profaịlụ extrusion akara
A na-eji ahịrị a n'ọtụtụ ebe maka ịmepụta profaịlụ WPC dị iche iche, dịka WPC decking profaịlụ, WPC panel, WPC board.
Usoro usoro nke akara a bu Eyi / Pee / ịkwanyere + osisi ntụ ntụ + mmako - mixgwakọta-ihe feeder-ejima ịghasa extruder- ebu na calibrator-agụụ akpụ table-bukọkna-apụ igwe-ịcha igwe-orùrù ogbe.
Nke a WPC profaịlụ extrusion akara ịmụta conic ejima ịghasa extruder, nke nwere degassing usoro iji hụ na ihe ndị magburu onwe ihe plasticization. Onye na-akpụzi ma na-edozi ya weghaara ihe eji eyi akwa; Enwere ike ịmepụta igwe na igwe mpempe akwụkwọ dịka igwe zuru ezu ma ọ bụ igwe dị iche.
PPR igwe igwe